आफ्नी प्रेमिकालाई ‘म साँचो प्रेम गर्छु’ भनेर कसरी महसुस गराउने? - यादका टुक्रा
केटीले उनको सुन्दरताको तारिफ सुन्न मनपराउँछन्, त्यसैले खुलेर उनको प्रशंसा गर्नुहोस् तर उनलाई सुरुमै सेक्सी वा हट नभन्नुस। आफ्नो जीवन साथीले आफुलाई “तिमि सुन्दर छौ” भनेको खुब मन पराउछन केटि मान्छेहरु। यस्तो सुन्दा उनीहरुको मन खुशीले गदगद हुनेगर्छ। हुन पनि त केटि मान्छेहरु आफ्नो प्यारो मान्छेको लागि राम्री देखिन कै लागि कति मेहनत पनि गर्छन। उसलाई आफ्नो परिवार र साथीहरूसँग भेटाउनुहोस, ताकि उसको मनमा तपाइँ प्रति विश्वास बढ्नेछ र उसले तपाईंको मित्रतालाई स्वीकारेर तपाइँलाइ आफ्नो दिलमा खास स्थान दिनेछिन। आफ्नो घर परिवार वा साथीहरु संग उनलाई बेलाबेला भेट गराउदै गर्नाले उनले तपाइंको बारेमा अझ राम्रो संग जान्ने मौका पाउछिन् अनि तपाईं उनलाई कति माया गर्नुहुन्छ भन्ने कुराको अनुभूति पनि गर्छिन्। यसो गर्नाले तपाईंको प्रेम सम्बन्ध सुन्दर भएर जान्छ।
यदि मौसम रमाईलो छ भने, उनलाई तुरुन्त बाहिर घुम्न लिएर जानुहोस। उनि सँग समय बिताउनुहोस्। मायालु वातावरण सिर्जना गर्नुहोस। उनका हातहरू समात्नुहोस् र बस्नुहोस्। उनको आँखामा आफ्ना आँखा जुधाएर कुरा गर्नुहोस्। केहि उनका कुरा सुन्नुहोस अनि केहि आफ्ना प्रेमिल बात बताउनुहोस। बिस्तारै उनका हातमा चुम्बन गर्नुहोस अनि उनका हातलाई आफ्नो काखमा राख्नुहोस। जब उनि तपाइँ बाट टाढा हुन्छिन तब उनलाई म्यासेज गरेर तपाइँ उसलाई कति याद गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। सानासाना कुरामा उसलाई आफ्नो प्रेमको महसुस गराउनुहोस्। भौतिक दुरीले मनको दुरी बढ्न दिन हुदैन। यदि उनि टाढा हुदा पनि तपाईं उसलाई सम्झी रहनु भयो भने उसलाई बिश्वास हुनेछा कि तपाईं उसलाई धेरै माया गर्नुहुन्छ भनेर।
Don't Miss it केटी मान्छेहरु यस्ता केटाहरुलाई मन पराउँछन्
Up Next सोसियल मिडियाबाट जीवन साथि खोज्नु सहि हो या गलत?
5 months ago 585 Views